लगानीका लागि उपयुक्त सेयर छनोट गर्न सक्नुभएको छैन ? त्यसो भए बफेटको यो विधि सिक्नुहोस्
काठमाडौं : वारेन बफेटलाई सबैभन्दा सफल लगानीकर्ताका रुपमा चिनिन्छ । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी ‘बर्कसायर हाथवे’ का अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका बफेटसँग लगानी सम्बन्धी लामो अनुभव रहेको छ । बफेटले पहिलो लगानी ११ वर्षको उमेरमा गरेको थिए । त्यसैले, बफेटको लगानी गर्ने शैलीलाई धेरै लगानीकर्ताले फलो गर्ने गरेका छन् । उनको लगानी सम्बन्धी अनुभव सुन्न र विभिन्न लेक्चरहरुमा सहभागी बन्दा पनि लगानी गर्न थप सहज महशुस गर्नेहरुको पनि कमी छैन ।
बफेट अमेरिकाको ओमाहामा सन् १९३० मा जन्मिएका हुन् । सानो उमेरदेखि नै व्यापारमा रुचि राख्ने बफेटले बिजनेसमा अन्डरग्राजुएट गरेका छन् भने अर्थशास्त्रमा डिग्री हासिल गरेका छन् । उनले सन् १९५० को सुरुवातमा लगानी बिक्रेता (इन्भेष्टमेन्ट सेल्सपर्सन) को रुपमा आफ्नो पेशाको सुरुवात गरेका थिए । सन् १९५६ मा ‘बफेट एसोसिएट्स’ स्थापना गरे । यसको १० वर्षभन्दा कम समयमै (सन् १९६५) उनले बर्कसायर हाथवे सम्हालिसकेका थिए ।
वारेन बफेटले बेन्जामिन ग्राहमले अभिनिर्माण गरेको ‘भ्याल्यू इन्भेष्टिङ’ लाई बढी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ग्राहमलाई वारेन बफेटका गुरुको रुपमा पनि चिनिन्छ । भ्याल्यू इन्भेष्टरले आफ्नो वास्तविक मूल्य भन्दा न्यून भाउमा कारोबार भइरहेका सेयरहरु पत्ता लगाउने तथा अनुसन्धान गरी खरिद गर्ने काम गर्छन् । बजार भाउका आधारमा अन्डरभ्याल्यूड सेयरहरु भ्याल्यू इन्भेष्टरको रोजाइमा पर्दछन् । बफेटले भ्याल्यू इन्भेष्टमेन्टलाई अर्कै तहमा पुर्याएका छन् ।
बफेट सेयर बजारको माग र आपूर्ति चक्रलाई वास्ता गर्दैनन् । वस्तवमा बफेट समग्र सेयर बजारको गतिविधिलाई नै वास्ता गर्दैनन् । उनी प्रत्येक कम्पनीलाई समग्रमा विश्लेषण गर्दछन् । सेयर पिक गर्दा पनि कम्पनीको समग्र सम्भाव्यतालाई आधार बनाउँछन् । त्यसैले बफेट पुँजीगत लाभको पछि लाग्दैनन् । नाफा बढाउन सक्ने विशेष गुण भएका कम्पनीहरुको स्वामित्व लिन उनी रुचाउँछन् ।
कम्पनी छनोट गर्ने बफेट विधि
वारेन बफेटले सेयरको श्रेष्ठताको तह र बजार भाउको लेखाजोखा गर्न विभिन्न आधारहरु केलाउने गरेका छन् । यिनै आधारहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गरी उनी कम्पनी छनोट गर्दछन् । बफेटले सेयर छनोट गर्दा कुन–कुन विषयको विश्लेषण गर्दछन् भन्ने यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
१ कम्पनीको प्रदर्शन
इक्विटीमा प्रतिफल वा रिटर्न अन इक्विटी (आरओइ) ले सेयर लगानीबाट लगानीकर्ताले कुन दरमा प्रतिफल पाउन सक्छन् भन्ने विषयको जानकारी गराउँछ । कुनै कम्पनीले एकै क्षेत्रका अन्य कम्पनीको तुलनामा निरन्तर राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन बफेट सधैं आरओई विश्लेषण गर्दछन् ।
कुल सम्पति (एसेट्स) बाट दायित्व (लायबिलिटिस) घटाउँदा इक्विटी प्राप्त हुन्छ । र गणितीय हिसाबमा, खुद नाफालाई कुल इक्विटीले भाग गर्दा आरओई प्राप्त हुन्छ । .गत विगत एक वर्षको आरोई हेरेर मात्र लगानी गर्नु उचित मानिँदैन । लगानीकर्ताले कम्तिमा विगत १० वर्षको आरओईलाई विश्लेषण गर्नु पर्दछ ।
२ कम्पनीको ऋण
बफेटले लगानी छनोट गर्नुअघि गहन रुपमा अध्ययन गर्ने अर्को विशेषता भनेको कम्पनीको डेब्ट टु इक्विटी (डीइ) रेसियो हो । यो रेसियोले कम्पनीको दायित्व र इक्विटीको संक्षेप प्रदान गर्दछ । बफेट चाहन्छन् कि कम्पनीको आम्दानी वा नाफा ऋण लिएको पैसाबाट नभई सेयरधनीले लगानी गरेको इक्विटीबाट उत्पादन होस् । त्यसैले बफेट जहिले पनि न्यून ऋण (डेब्ट) भएका कम्पनीहरु छनोट गर्दछन् ।
कम्पनीको कुल दायित्वलाई कुल इक्विटीले भाग गर्दा डेब्ट टु इक्विटी रेसियो पाइन्छ । यसले कम्पनी कति लोनमा र कति आफ्नै सम्पतिमा सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने संकेत गर्छ । यस रेसियोले कम्पनीको ऋण अधिक छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउन सहयोग पुर्याउँछ । बढी डीइ रेसियोले कम्पनी अधिक ऋणमा छ भन्ने संकेत गर्दछ ।
३ नाफा (प्रोफिट) मार्जिन
कुनै पनि कम्पनीको लाभदायिकता (प्रोफिटेबिलिटी) राम्रो प्रोफिट मार्जिनमा मात्र नभई निरन्तर वृद्धि गर्न सक्ने क्षमतामा पनि निर्भर हुन्छ । प्रोफिट मार्जिनले व्यापारको कति प्रतिशत हिस्सा नाफामा परिणत भएको छ भन्ने सूचित गराउँछ । सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा, यस्तो प्रतिशत आँकडाले १ रुपैयाँको व्यापार गर्दा कति पैसा नाफा हुन्छ भन्ने जानकारी दिन्छ ।
कम्पनीको प्रोफिट मार्जिन सम्बन्धी राम्रो जानकारी हासिल गर्न कम्तिमा पनि ५ वर्षको प्रोफिट मार्जिनलाई अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रोफिट मार्जिन धेरै हुँदा कम्पनीले राम्रोसँग व्यवसाय गर्दै आएको छ भन्ने जानकारी पाइन्छ । तर बढ्दो क्रममा रहेको मार्जिनले भने कम्पनीको व्यवस्थापन खर्च नियन्त्रण गर्न निकै प्रभावकारी रहेको पनि जानकारी हुन्छ ।
४ कम्पनीले कति वर्ष पहिलेदेखि आइपीओ जारी गरेको हो ? अनि सञ्चालनमा छ ?
बफेटले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अस्तित्वमा रहेका कम्पनीहरु मात्र छनोट गर्ने गरेका छन् । त्यसकारण विगत १० वर्षभित्रमा आइपीओ जारी गरेका अधिकांश आइटी कम्पनीहरुमा बफेटले लगानी गरेका छैनन् । भ्याल्यू इन्भेष्टिङको एक महत्वपूर्ण पक्ष भनेको समयको परीक्षणमा खरो उत्रिएका तर तत्काल अन्डरभ्याल्यूड भएका कम्पनीहरु छनोट गर्ने हो । बफेटले पनि लामो समयदेखि व्यवसाय गर्दै आएका र आफूले व्यवसाय गदै आएका कम्पनीमा लगानी गर्ने गरेका छन् ।
५ कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता
बफेट कुनै एउटामात्र प्रोडक्टमा फोकस हुने कम्पनीमा लगानी गर्न रुचाउँदैनन् । उदाहरणका लागि तेल तथा ग्याँस । बफेट अन्य कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि विशेष किसिमका फरकफरक प्रोडक्ट तथा सर्भिस नभएका कम्पनीमा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् । बफेटको छनोटमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका कम्पनीहरु बढी पर्ने गरेका छन् । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा, एउटै क्षेत्रका कम्पनीहरुमध्ये जुनले फरक र युनिक प्रोडक्ट वा सर्भिस दिन्छ त्यसैमा बफेट लगानी गर्दछन् ।
निफ्राको नाफा २५.६६% बढ्यो, इपीएस कति ?
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तले बढायो नाफा
एभरेष्ट बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद थप, अब माघ १७ गतेसम्म पाइने
नेसनल माइक्रोफाइनान्सको आज एजीएम, सेयरधनीलाई लाभांश
कोरोना परीक्षणको शुल्क घट्यो, अब सरकारीमा ८०० तथा निजीमा १५००